Regedzera Predictive Analytics kuti SIMPLIFY yako nzira kune inoitika inoitisa, BATSIRA danho uye DZIDZA yakagadzikana bhizinesi mhedzisiro. Mune yanhasi tekinoroji yepasirose pasirese, kufambira mberi kwetekinoroji kwakaita kuti kuve nekukwanisa kufambira mberi kweData Analytics kubva kuchinyakare BI mhinduro kune fungidziro uye inotsanangurwa analytics mhinduro. Predictive Analytics inobatsira kufanotaura zvichaitika mune ramangwana nemaitiro uye nekukurumidza kuita sarudzo. Ndiyo nzira inonyanya kutsvakwa nemabhizimusi ekuziva iyo "kukosha kutsva" yakavharirwa mukati meruzivo rwavo nekufungidzira zviono, maitiro emangwana nekusvika pazvisarudzo zvirinani zvekusimudzira bhizinesi kukura.
Google Prediction API, Microsoft Azure Machine Kudzidza, BigML, PredictionIO